Wafdi ka socda Qaramada Midoobey iyo Midowga Afrika oo maanta gaaray Baardheere – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wafdi ka socda Qaramada Midoobey iyo Midowga Afrika oo maanta gaaray Baardheere
MAREEG 12 August 2015
ararka ka imaanaya degmada Baardheere ee Gobolka Gedo ayaa sheegaya in wafdi ka socda Qaramada Midoobey iyo Midowga Afrika ay gaareen, kuwaasoo u kuur galaya xaaladaha nololeed ee degmadaas.
Sida ay sheegayaan wararka wafdiga ayaa diyaarad Helicopter ah ku tagay degmadaas, waxaana ay indha indheynaya xaaladaha bani’aadanimo iyo sidii gargaar loo gaarsiin lahaa.
Guddoomiyaha degmada Baardheere Caddow Nuur Xasan ayaa sheegay in wafdigan ay durbaba kormeereen qeybaha ay ka kooban tahay magaalada, isla markaana ay kala hadleen sidii ay gurmad u fidin lahaayeen dadka ku nool degmadaas.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in xubnaha ka socday Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobey kala hadleen dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo halka uu marayo howl galada.
Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda ayaa bishii la soo dhaafay la wareegay degmada Baardheere, halkaasoo muddo sideed sano ku dhow ay ka talinayeen Al-Shabaab.
Wax garad Jubbaland oo ku baaqay in dib u heshiisiin laga hor mariyo Doorashada Maamulkaas